Ngokuhamba kwesikhathi lo muntu uzobe ebhekene eside ezifana DHA-S. Kuyini, ukuthi kuyini, futhi kukhombisa, kanye ezicashile ahlukahlukene - konke odinga ukukwazi ukuze akuqonde kwale hormone emphilweni wonke umuntu. DHA-S - wukuthi lokuqala zonke ubonisa ikhono nezindlala adrenal ukukhiqiza ama-hormone nemithi amadoda.
Lokhu isifinyezo imele zombili sulfate dehydroepiandrosterone. Kuyinto wobulili i-hormone wesilisa, elitholakala egazini amadoda nje kuphela kodwa futhi abesifazane. Qalisa adrenals yayo, futhi ezikhiqiza amaqanda / testes endaweni isilinganiso 95 kuya 5 amaphesenti, ngokulandelana.
Iphendula umbuzo "DGA S -? Kuyini lokhu", singasho ukuthi lena androgen ebuthakathaka, kodwa ngemva amadoda sisebenza, uvele uguqulwe androgen eqinile. Labo mama bayajabula ezahlukene zonke kancane, banakho liphenduka ucansi a estrogen ejwayelekile buthaka.
ngokuvamile esigabeni esilandelayo zokuthomba abafana isizukulwane le-hormone.
DGA S abesifazane
Kuthiwani uma DGA S liphakeme besifazane? zingase zihluke kakhulu izizathu. Okokuqala okudingeka siyenze ekuhlaziyweni ukuhlonza umthombo ukuphambuka. Lokhu kungaba ngenxa ukungasebenzi nezindlala adrenal noma amaqanda. Kufanele futhi ukhulume le hormone kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa.
Iqiniso ukuthi abesifazane abakhulelwe ngokuvamile kwenzeka isimo lapho ukuhlaziya Kutholwe kokweqa inombolo yama-hormone wesilisa egazini. Ngenxa anda DHA-S ekuseni ngesikhathi besakhulelwe noma lapho isisu kungenzeka. Ngamanye amazwi, lo kwesisu.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, placenta isebenzisa le hormone ukuguqula it estrogen. Ukwandiswa DHA-S athi ukuthi awenzi umsebenzi walo futhi yenza-ke kahle ngokwanele.
Amazinga DHA S
Ukuze kwenkathi ngayinye emphilweni DHA-S kuyinsakavukela ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, abantu besifazane, amadoda nabantwana, futhi kuyehluka futhi ulinganiswa amavukuzi ilitha. DHA-S izinga kwabesifazane zokhahlamba kusuka 0,09 kuya 14.5, kuye ngokuthi yobudala bayo. The men - kusuka 0.2 kuya 16.1, ezinganeni - kusuka 0,06 kuya 1.1 futhi, kuye ngokuthi yobudala.
Ukulungiselela nokulethwa cwaningo
Ngaphambi ukuhlaziywa, it is hhayi Kunconywa ukuba adle noma aphuze amahora ayisishiyagalombili kwabayishumi phambi ngokudlula kwakhe emhlabeni. It bavunyelwe amanzi kuphela ngaphandle amagesi futhi akhiphe amanyela. Yiqiniso, ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala iphinde ivinjelwe, futhi abesifazane kungukuthi bakhuthazwa ukuba unikele ngegazi esesikhathini. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba wazise udokotela ukuthi imithi oyiphuzayo, futhi ucacise lokho.
Kusukela izidakamizwa ezahlukene ezenza imithi nemithi elwa namagciwane inkomba DHA-S ziyahlukahluka. Ngokwesibonelo, ukwanda zesikhashana ezingeni ungalindela lapho ukubhema, ukusebenza komzimba isikhathi eside, ukudla nokunye. Okwesikhashana ezingeni encishisiwe nasemkhakheni umsebenzi utshwala, ukukhuluphala, iziyaluyalu ezingokwengqondo, ukucindezeleka, noma ukusetshenziswa kwemithi elwa namagciwane phakathi abesifazane ukuzalwa.
Izimbangela zokushintsha ezingeni DHA-S
Uma DCA-S liphakeme kwabesifazane, akusho ukuthi inkinga nezindlala adrenal. Nakuba ezimweni eziningi ngcono njalo ezingeni DHA-S uthi kukhona izinkinga nale igunya ezingeni kuyanda futhi ezibanga izifo Cushing Syndrome, ukuntuleka nekusebenta yi-placenta, iziyaluyalu hormone nezinye izifo.
Yiqiniso, izimila ahlukahlukene adrenal futhi kuholele amazinga anda kwale hormone. Ngezinye izikhathi, ezinsukwini zokuqala ngemva kokuzalwa kwengane kungase babe namazinga aphezulu DHA-S. Ezimweni eziningi, isamba okwandisiwe hormone ngenxa yokugula noma kwezinso, kodwa ngezinye izikhathi livikela abesifazane ukukhumuzeka kwamathambo.
DHA-S kungabuye encishisiwe at ngeziphambeko noma syndromes ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile kakhulu encishisiwe amazinga ama-hormone kubantu abaphethwe etshwaleni. Level incike operability adrenal. ukusebenza Unciphise nezindlala adrenal ngokuthi isifo Addison sika.
Abantu abaningi buza umbuzo, "DGA-hormone okuthiwa i S -? kuyini futhi ziyini". Kodwa-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi kwenzekani ezimweni lapho ezingeni uhlala isimo ephakeme noma kwanciphisa isikhathi eside.
Uma nezindlala adrenal ukukhiqiza kakhulu kwale hormone, kungaholela ukungazali, ekunqanyulweni kwesikhathi sokukhulelwa, ukuguga noma ngokweqile izinwele zikhula zibheke ngakhona. Uma umzimba akuyona umthamo ngokwanele ekhiqizwa, kungase kuholele Ukwehla enqubeni nezingokomzwelo zokuthomba. Ngokuvamile Lokhu kwenzeka ngenxa isifo eshiwo ngenhla Addison sika.
Ukuze ugweme ngemiphumela ukuphambuka kusuka uthola cwaningo, ngokushesha xhumana endocrinology yakho noma udokotela wezifo zabesifazane.
DGA S ngesikhathi sokukhulelwa
amazinga hormone DHEA-sulfate ingahluka kakhulu phakathi kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa, futhi lokhu kungokwemvelo. Vele ungakhohlwa ukuthi ngeziphambeko okukhulu kusukela kuyinsakavukela kungaholela nemiphumela engelapheki. Ngakho-ke, kubalulekile ukugcina ochwepheshe ekukhulelweni.
Ngokuvamile ngesikhathi sokukhulelwa amazinga evamile DHEA incipha, kodwa futhi kungasho placenta-non-ukusebenza, njengoba akufanele sikhohlwe. Nge nokwanda okuphawulekayo hormone kuyadingeka ukuthatha ezinye izinyathelo zokunciphisa ke, njengoba nje kwenzeka lapho eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa umzimba.
Artificial DHA S
Ngezinye izinkinga ezihlukahlukene nge nezindlala adrenal, iziguli eziningi kakhulu ngokushesha badonsekela ochwepheshe iseluleko kanye kadokotela yokwelashwa, uma kudingeka. Kusekhona ezinye izindaba ezinhle kulabo unezinkinga hormone egazini evamile. Ososayensi baye wadala ikhophi yokufakelwa ngakho, ukuze abantu kungathatha it futhi musa uhlushwa izifo ezihambisana ne ngeziphambeko kusukela kuyinsakavukela.
Uma uthatha DHEA-S anda izenzo zocansi. Odokotela batusa kakhulu hhayi ukusebenzisa hormone le njongo kuphela. Kunalokho, ukwanda ucansi uhlobo ibhonasi. Ngaphezu kwalokho, DHEA-S kuthuthukisa ukucabanga, inkumbulo, futhi, ngokuvamile, kuba nomphumela omuhle impilo kanye nesimo umzimba womuntu kakhulu eminyakeni yokuguga. Lokhu kungenxa yokuthi i-DGA S oluthinta ngqo inqubo umzimba yokuguga.
Uma umuntu uzigcinile nobunzima ngamafutha esivuthayo, futhi ngenxa yalokho, i esengeziwe amafutha, i-hormone okuthiwa i yokufakelwa amaphilisi ukuxazulula le nkinga. Ubunzima ngamafutha evutha kungenzeka njengenhlangano Ukudla ayilungile, futhi ngenxa yezinye izifo umzimba noma simpofu azalwa nako.
Kuphela ukuba ashise amanoni futhi hhayi Kunconywa ukuthatha lezi amaphilisi, njengoba kulokhu, kuyodingeka uthathele inkulu kakhulu umthamo, okuyinto igcwele neminye imiphumela. Ngakho-ke, le hormone esithathwayo kuphela uma untula emzimbeni, kanye nethonya elizuzisa ezengeziwe emzimbeni - lena ukusetshenziswa yesibili imiphumela.
I-hormone amaphilisi ngokuyisisekelo kusiza ke ukunqoba ukukhathala okungamahlalakhona, okuyinto esivela abantu lapho usukhulile. Ngokuzimela amaphilisi ngesikhathi sokukhulelwa akuvunyelwe nakancane. Ngo sokukhulelwa, ezimweni eziningi, amazinga ama-hormone, kanye siphakeme kakhulu, ngakho ukusetshenziswa noma yimuphi umuthi kungenzeka kuphela ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe.
Ukwelashwa izifo kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni
DHEA-S kusiza ukukhathala okungamahlalakhona, amasosha omzimba kwehlisa noma yizifo ezihlobene nokungabikho amasosha omzimba. Ivame elibekelwe abesifazane lapho usukhulile. Ngemva kwamasonto ambalwa, abesifazane kokuthatha lesi izidakamizwa, uzizwa kuqubule amandla, amandla, kanye nokwenziwa ngcono okuphelele umzimba.
ososayensi ucwaningo ezahlukahlukene emhlabeni ziye zaholela lokho manje eziningi izifo ingelapheka ngokuthatha amaphilisi ama-hormone. Ososayensi wafinyelela esiphethweni mayelana DGA S, ngalo angafeza uhlobo ekwelapheni izifo ezihambisana isimiso somzimba sokuzivikela, ikakhulukazi uma i-hormone ezingeni lehliselwa.
DHEA sulfate njengoba yaphathwa izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba. Ngokuvamile zibonakala ngenxa yokuthi umzimba uqala ukuphendula ngokungalungile kwabanye emangqamuzaneni omzimba. Okusho ukuthi, ngezinye izikhathi izivikeli mzimba iqala ukusebenza kakhulu ngenkuthalo, futhi lokhu kuholela ekuphelelweni lokuthi elwa eziyingozi hhayi kuphela, kodwa futhi nge amaseli ezivamile eziyishumi nemitshingo. Kulokhu Ungase futhi akwabele DHEA-sulfate.
Ukuze sigweme imiphumela engavela lapho ngeziphambeko kusukela kuyinsakavukela ezingeni hormone DHA S egazini, abanye izinyathelo kungaba kwenziwe. Ngokwesibonelo, uma ubona ayephuli yakhe umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi noma nge-ovulation engekho, ungacabanga ngendlela ukuthatha amaphilisi DHEA-sulfate.
Nokho, khumbula ukuthi isinqumo ezimele kwi Ukwamukelwa kwanoma yiliphi izidakamizwa kungaba yingozi, ngakho ngaso sonke isikhathi uxhumane uchwepheshe.
Futhi, izinkinga ezihlukahlukene ngezipikili kanye nezinwele kungaba ngenxa yokuphazamiseka hormone. Yiqiniso, kungase kube nethonya ngokweqile izimonyo (Umbala njalo izinwele noma izipikili noma processing). Kodwa uma wenza kahle ukuze ubuke izinwele nezinzipho, futhi musa kabi izimonyo, kufanele wenze aphoyintimenti ukubona udokotela.
Njengoba sekushiwo ngenhla, DHA S kuhlobene inqubo yokuguga. Yiqiniso, akekho lokhu, Nokho, ivikelwe uma inqubo yokuguga luqala ekuseni kakhulu, lokho kungase kubonise ukuthi inkinga nge-hormone. Abesifazane ngaphansi 37, ngubani sebeqala uhlangabezana nezinkinga nge isikhumba noma ezinye izinkinga esivela abantu yobudala emaphakathi, kutuswa ukuba kudokotela. Ukubonisana isimiso, akazange umonakalo.
Ngokuvamile, uma uzwa ukukhathala, ukucindezeleka ubona inkinga isimiso somzimba sokuzivikela nezinye hormone ahlobene, ungazami ukuzixazulula bebodwa. Nganoma yisiphi isizathu, kangcono ukuze ujike ochwepheshe, ngoba abantu nje ubuhlungu yena, ukuqoka yena ukuphathwa okungalungile.
Yilokho konke okudingayo ukuze ukwazi mayelana DGA S. Sethemba, ngemva kokufunda lesi sihloko, nawe ngeke isavela umbuzo DGA S - kuyini. Okubaluleke kakhulu - khumbula ukuthi ngezinye izikhathi imbangela yezinkinga eziningi kungaba ukuhlukumeza isizinda hormone.
Gcina umbhalo walokho ezingeni DHEA-sulfate emzimbeni wakho. Khumbula ukuthi ukuphambuka kusuka kuyinsakavukela kungaba yinto yesikhashana noma evamile, kodwa futhi ungakhohlwa ngemiphumela engase ivele uma ungenawo ulandele hormone noma ukuziba izinkinga ezihambisana nalo.
Liyini igama lezwe enyakatho lapho kuvela khona umbuso wase-Asiriya? Umlando wemvelaphi yawo
Nemibango engokohlanga osekuthathe
Lapho wathwebula "eyisithunjwa Caucasian"? Ngayiphi zomuzi ukuqopha "eyisithunjwa Caucasian"?